विवाहको अर्थतन्त्र - Karobar National Economic Daily
query_builderMarch 1, 2017 10:55 AM supervisor_accountधर्मेन्द्र कर्ण visibility593
बेलायती भौतिकशास्त्री स्टिफन हकिन्सले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स)को पूर्ण विकासले मानव जातिको विनास निम्त्याउने गरेको भविष्यवाणी गलत सावित भए मानव समाजको विकास क्रममा विकसित विभिन्न संस्कारहरूमध्ये विवाह मानव समाज रहिरहेसम्म रहने देखिन्छ ।
यद्यपि मानव जीवनका संस्कारहरू आर्थिक सामाजिक सम्बन्धका आधारमा निर्माण भई बदलिँदै आएको पाइन्छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मकै संस्कार मानव समाजका विभिन्न समुदायमा विभिन्न किसिमका छन् ।
घुमन्ते मानव समाजमा कृषिकर्मको चेतनाको विकास भएपछि मानव सभ्यताको संगठित विकासक्रम प्रारम्भ भएको इतिहासविद् तथा संस्कृतिविद्हरूको बुझाइ छ । त्यसक्रममा वैवाहिक संस्कारको विभिन्न समुदायमा विभिन्न किसिमको रही आएको छ । नेपाल हिन्दुधर्मावलम्बी बाहुल्य देश हो ।
भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड, तराई तीन भागमा विभाजित छ । हिन्दुवर्णाश्रम व्यवस्थाअनुसार तराईका मधेसी समुदाय पनि विभिन्न किसिमले विभाजित छन् । ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र पारम्पारिक विभाजन मधेसी समुदायमा पनि रहेको पाइन्छ ।
यी चारभित्र पनि केही विभाजनहरू छन् । तर समग्रमा यसलाई मूल विभाजन उपल्लो र तल्लो जातका रूपमा विभाजन गरी हेर्दा पनि उप–विभाजनलाई वर्णन गर्न सकिने अवस्था छैन । तर जाति–जातिबीचको वैवाहिक संस्कारलाई सजातीय विवाह र यसको विपरीत विजातीय वा अन्तरजातीय विवाह भनेर बुझिने गरिन्छ ।
पछिल्लो समय विवाहको पारम्पारिक मान्यताहरू बदलिँदै आए पनि विवाहोत्सवमा समाजका सबै वर्ग र समुदायको उत्तिकै सहभागिता छ र त्यो रहिरहन्छ । यसमा मन्दिरदेखि टेन्टसम्म घरदेखि ब्यांक्वेटसम्मका विवाहमा खर्चको आवश्यकता हुन्छ ।
खर्च अर्थतन्त्रको अंग हो, हामी नचाहेरै पनि आफ्नो संस्कार पूरा गर्ने क्रममै अर्थव्यवस्थाको अंग बनिरहेका छौं । अझ त्यसमा विवाहमा हुने खर्चले त समग्र अर्थतन्त्रकै आकार बढाउनमा मद्दत पुर्याउँछ ।
अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्रलाभ कर्ण विवाहको अर्थतन्त्रबारे अहिलेसम्म कसैले ठोस रूपमा अध्ययन नै नगरेको बताउँछन् । “यो मुख्य आर्थिक गतिविधि हो, यातायातदेखि परिधनसम्म, खानपिनदेखि आर्शीवादसम्म ठूलो खर्च भइरहेको हुन्छ,” कर्णले भने ।
खर्चविहीन मानिने मन्दिरको विवाहमा पनि खर्च हुन्छ । कम्तीमा दुलहा र दुलहीको पोशाक र दुलहा–दुलहीले एक अर्कालाई वरण गर्नका लागि चाहिने पुष्पहार पनि किनेरै ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
विवाहोत्सवमा हुने सबै विधि–विधानमा प्रयोग हुने सामग्रीको उत्पादन, बिक्री वितरणले ठूलो अर्थतन्त्र निर्माण गरिसकेको छ । विगतमा विवाह धर्म, संस्कार र सामाजिक कार्यसँग सम्बन्धित विषय भए पनि अहिले यो अर्थतन्त्रको बजारको रूपमा विकास भइसकेको छ ।
विवाहका लागि आवश्यक पर्ने दुलहा र दुलहीको खोजीका लागि म्यारिज ब्युरोसम्मको अनलाइन सेवा उपलब्ध छ । जहाँ दुलहा र दुलही पक्षले आफूलाई चाहिने वरबधुको खोजी गर्छन् ।
विवाहमा अहिलेको जस्तो अर्थ(धन)को सम्बन्ध सुरूमा नरहेको बताउँछन् तराई मधेसका सांस्कृतिकविद् डा. राजेन्द्र विमल । “पहिले विवाहको सम्बन्ध धर्मसँग थियो । तर अहिले यसको पहुँच बजारमा भएको छ,” उनी भन्छन् ।
यसले समाजमा विकृति ल्याएको छ । दाइजोको विकृतिले परिवारलाई समस्या भइरहेको बताउँदै डा. विमलले भने, “तराई क्षेत्रमा अतिविपन्न परिवारलाई पनि विवाहोत्सवको विधि पु¥याउन कम्तीमा ३ देखि ५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।
ठूला सम्पन्न परिवार र डाक्टर–इन्जिनियर परिवारको कुरो गर्न गाह्रो छ । यस्ता परिवारमा विवाह समपन्न गर्न कम्तीमा ५० लाखभन्दा माथि खर्च हुन्छ ।” विवाहोत्सवमा हुने खर्चहरूमा दुलहा–दुलहीको परिधानमा हुने खर्च, विवाहस्थलको सजावटमा हुने खर्च, गरगहनामा हुने खर्च, शृङ्गार एवं मनोरञ्जनमा हुने खर्च, नवदम्पत्तीले वैवाहिक जीवनको सुरूवात गर्न मधुमास “हनिमुन”का लागि खर्च र भोजभतेरमा हुने खर्च समावेश हुन्छ ।
वरबधुका लागि पारम्पारिक पोशाकका साथै चलनचल्तीको फेसनअनुसारको पहिरनको माग पनि समाजमा बढिरहेको छ । पारम्पारिक पोशाकको खर्च तत्काल वैवाहिक विधि पूरा गर्न गरिन्छ । त्यसपछि फेसनअनुसारको परिहनमा नवदम्पत्ती हनिमुन पिरियडका लागि हुने खर्चहरू विवाहकै खर्चभित्र राख्ने गरिएको पाइन्छ ।
२५ वर्ष अघिसम्म मधेसी समाजमा छोरा पक्षबाट रेल्ले साइकल, रिको घडी, सुनको आंैठी र सुटका साथै नगदको माग सामान्य मानिन्थ्यो । अहिले यो माग बदलिएको छ । सामान्य परिवारले विवाहमा रेल्ले साइकलको ठाउँमा मोटरसाइकलको माग हुन थालेको छ ।
यसले तराई मधेसको विवाहमा मोटरसाइकलको बजार पुगेको छ । तराई–मधेसको विवाहले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप सहयोग पुर्याउन थालेको आर्थिक नीतिबारे सुझाव दिन गठित प्राविधिक समितिका सदस्य डा. सुरेन्द्रलाभ कर्ण बताउँछन् ।
उनका अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपाल भारतबीच हुने वैवाहिक सम्बन्धमा कमी आउन थालेको छ । तराई मधेस क्षेत्रमा हुने विवाहको अर्थतन्त्रबारे कुनै ठोस अध्ययन नभएको बताउँदै उनले भने “अहिलेका विवाहमा हुने खर्चको लाभ नेपालभित्रै रहने भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।”
दाइजोको रूपमा हुने खर्च होस वा विधि प्रक्रियाका आधारमा हुने खर्चको लाभ अहिले भारत बाहिरिने क्रममा घटेको छ । उनी भन्छन् “सहर बजारमा बस्ने मध्यम वर्गको एक परिवारले गर्ने खर्च १० देखि १५ लाखसम्म हुने गरेको छ भने सम्पन्न परिवारमा यो खर्च ५० लाखदेखि १ करोडसम्म हुने गरेको छ ।”
गाउँघरका मध्यम वर्गको खर्च ३ देखि ५ लाखसम्म हुने गर्छ । विवाहको अर्थतन्त्रलाई बुझने काम अहिले भएको पाइँदैन । विवाहमा प्रयोग हुने सामग्री सबै भारतबाटै आइरहेको छ । यस्ता सामानहरूको उत्पादन नेपाली लगानीकर्ताबाट भए यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप टेवा पुग्ने भनाइ अर्थविद् डा. कर्णको छ ।
विवाहमा हुने खर्चमा आधारित अर्थतन्त्रको ठोस अध्ययन हुनु अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनले भने, “जसरी वैवाहिक सम्बन्ध नेपालभित्रै हुने प्रचलन बढेको छ त्यसैगरी यसमा प्रयोग हुने सामग्री र सेवाको उपलब्धता नेपाली उत्पादनकर्ताबाट हुन सके यसको थप सकारात्मक प्रभाव मात्र तराई मधेसको अर्थतन्त्रमा होइन सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ ।”
हिमालदेखि तराईसम्मै विवाहको विधि र प्रक्रिया फरक हुने भएकाले हरेक विवाह उत्सवले स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याइरहेको कर्णको भनाइ छ ।